IWatermark Pro yeWindows - Inkqubo yoQeqesho lokuNgqinisisa iWhatshu | Iplum iyamangalisa
Asanda: 5 / 19 / 21
-Umcimbi ohleliweyo wokubonakala kwe-.png kwimvelaphi yezithombe.
-Xa usebenzisa i-No Scaling, ufihla ulawulo lwefonti. yenza kube lula ukuyiqonda.
-lungisa imiba yokufaka
-ukuphucula ukukopa kwemethadatha
-Utshintsho oluncinci kwiWatermarkEditor entsha ngobungakanani
-Ikhowudi ehlaziyiweyo yezitshixo ezinkulu zelayisensi
- Ubungakanani befonti ehlaziyiweyo kumgangatho othe tye / othe nkqo
-Ukusebenza kweLogMagick Logs
UkuSombulula umba wokuXhasa Inkqubela 2628
-Uhlaziya iifayile zokuguqulela zaseJapan
-Ucoceko kwizikhundla zeLebhu.
-i-stegomark ngoku igcina ubungakanani bentsusa kunye ne-DPI ngesicatshulwa esifihliweyo.
-Incoko yabhaliso iza ngaphambili kwaye ayinakufihlwa ezinye iiwindows.
- Inombolo yenguqulo eyongezwe kwikona yasekhohlo yefestile ephambili
-fakela imiyalezo ephuculweyo.
-i-stegomark ayisacimi idatha ye-iptc.
-Ukuguqula ukukala nokwenza ukuvuselela ngoku isikali ukuya kubungakanani obuchanekileyo.
-itshintsho "Yenziwe ngeWatermark Pro. Bhalisa ukususa le watermark" kuphela "Yenziwe ngeWatermark Pro yeeWindows"
-ukuba umsebenzisi uzama ukusebenzisa nantoni na kodwa i-jpg kumyalezo wempazamo ye-stegomark ngoku 'uSerggark wamkela i-JPEG yokufaka kunye ne-JPEG'
Nceda ugcine ingxelo kunye neengcebiso ezizayo. Enkosi
-isombulula umba wokufaka / ukungakhupheli
- Inkqubela phambili yefestile ibonisa imbonakalo yomfanekiso ngamnye obonwe.
-Utshintsho lokongeza 'i-heic' kunye neefomathi ze-jp2000 zokukhupha
-asonjululwa imiba engakhuphelwanga
Ukuphuculwa kwe-misc ui
- Olunye utshintsho lwangaphakathi
-Ukuphuculwa kolwandiso lweqokobhe
enkosi kubasebenzisi abaye baxela imiba eneenkcukacha. iyanceda. kuye wonke umntu ukuba unengxaki nceda uxele. enkosi.
-umxholo uza kungekudala.
- i-netparkle entsha ukuvumela ukukhangela uhlaziyo.
-kufuneka uvumele ukhuphele itshekhi yohlaziyo kunye nokufakelwa.
-ukusebenziseka kokulungiswa kwemifanekiso
-xa usithumela / sisabelana ngeebhendi zeefoto ezihlaziyiweyo zinye kuphela ngoku.
-Imenyu yongezwe kwimibuzo yesisombululo
-I-emboss kunye nomzobo ziphuculwe kuphela kwiteksti yombhalo. Ezinye iitermark zohlobo lokubhaliweyo ziya kufumana ukuphuculwa okufanayo kungekudala.
-I-lag yolawulo lwe-opacity emiselweyo
- imicimbi ka-Uyi
-susa igama lefayile kufuneka ikhawuleze ukukhetha ulawulo olusisigxina
-uphinda-phinda i-watermark ngoku iyasebenza
- Ukususa ubungakanani kwakhona - yongeza i-60 ye-DPI ukhetho kwimenyu
- i-stegomark ngoku izama igama eligqithisiweyo ngokungagqibekanga
-umbukeli we-stegomark ngoku uvumela ukuba uphinde usayizi
- I-icon yolwazi lwegalelo (?) ngoku ibonisa indawo esikuyo umfanekiso
-Ukuthumela ngaphandle ii-watermark ezininzi ngoku kuhamba kube kanye (Qaphela: bamba iqhosha lokushiya ukukhetha ii-watermark ezininzi zokuthumela ngaphandle okanye ukufaka isicelo), Okwangoku ukulungisa: ukukhawulezisa igama lefayile kufuneka likhethe ifolda
Iqhosha elisekunene nangasekhohlo livumela ukutshintsha imifanekiso.
-i-ui yokulungisa ukukhutshwa kunye nokukhutshwa kwe-dpi.
-izinto ezithile ezisuswe kwimenyu 'yefayile'
-Ngoku ixela impazamo ukuba akukho seto ikhutshwayo
-iziphene zisetelwe kufakelo lokuqala
-Inqaku elitsha: iqhosha lesekhohlo nelasekunene kufuneka livumele ukutshintsha imifanekiso.
-I-Exif Viewer kunye neefestile zoLwazi lweFoto-zidityaniswe kwiwindows enye.
- Into entsha: Qamba ngokutsha-yongeza imenyu yokuseta enikwe igama kwakhona njengeMac.
-jonga imisebenzi yohlaziyo
-Umcimbi osisigxina womfanekiso onendawo yokulandela igama lefolda
-ngoku unokukopa metadata kwi-jpg.
-Ikoloni yolwandiso lwemisebenzi yokujonga amanzi
-Izandiso zegobolondo ngoku zihlonipha useto: Ulawulo lwezinto ezikhutshwayo, qamba ngokutsha, njl.
-inokuhlela iitermark ezingeniswe ngaphakathi
-Ukuphinda unike igama kwakhona umbandela weefayile
- Umcimbi ophambili osonjululwe
-nika ingxelo engcono kwi-win 10
-Ulunye uphuculo oluninzi kunye nokwanda
-Iqhosha lokuhambisa lisebenza ngokuchanekileyo.
-ukutsala kusebenza ngokuchanekileyo.
Nceda ugcine ingxelo ezayo ngale nguqulelo yamva. enkosi
-i-watermark ezintsha, imigca, isibhengezo, i-stegomark
-ngoku ufunda kunye nemifanekiso ye-watermark ye-RAW
-ukuphuculwa kwendlela yokusebenza yomsebenzisi ukuhlela ii-watermark
Ikhowudi yokuhanjiswa Ukulungiswa kweencukuthu,
-ihlaziywe kwisakhelo se-.net 4.7.1 kwaye yongeza iKhowudi yokuQaphela ye-DPI.
-ukusayina ikhowudi entsha
-ku Ngoku ngokupheleleyo kungama-64
-inguqu ezininzi kunye nophuculo aludweliswanga
Bonke abasebenzisi nceda unike ingxelo yakho kunye neengcebiso malunga nale nguqulo intsha. enkosi
Iindaba-sasinalo uhlobo olutsha olunendlela engcono yokongeza ii-watermark kodwa zingenazo zonke iimpawu ezenziweyo. oku kubangele imibuzo kwabanye abantu ke siye sagqiba kwelokuba siphinde sibuyele kolu hlobo lwakudala de ezo nkangeleko zongezwe kolu hlobo lutsha.
[Eyisongelweyo]-Indawo "yokuFaka iiFayile kunye neefolda" indawo ayiyekelanga ifayile
[Ilungisiwe] - ithebhu yokulinganisa kwakhona engashukumiyo igcina dpi.
Ifayile yePad ngoku:
[FIX] Umgca omncinci wawubonakala ngaphezulu nasekhohlo komfanekiso (umbandela usonjululwe)
[FIX] Igama lefayile ehlaziyiweyo ngexabiso elipheleleyo liqalisiwe ukusuka ku-1 endaweni yokufakwa endaweni.
[FIX] Umsebenzisi kufanelekile ukuba akwazi ukugcina umfanekiso ngokwendlela echaziweyo eyandisiweyo kwaye ulwandiso luya kubakho kwixesha elizayo.
[MOD] Ukuphuculwa kwelayisensi yecandelo. Vumela ukucima izinto ezithile.
[FIX] ibonisa umyalezo wesilumkiso ukuba isisombululo esingaphantsi kwesisombululo siyimfuneko.